Ngubani UYehova? “Khangela! Lo NguThixo Wethu” | Sondela
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBaoule IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNgesi IsiNiuea IsiNorway IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiShona IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiThai IsiTok Pisin IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUruund IsiVenda IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
“Khangela! Lo NguThixo Wethu”
1, 2. (a) Yiyiphi imibuzo obunokuthanda ukumbuza yona uThixo? (b) UMoses wambuza ntoni uThixo?
NGABA unomfanekiso-ngqondweni wakho uncokola noThixo? Oko kuyoyikisa—uMongami wendalo iphela ethetha nawe! Uyathandabuza ekuqaleni, kodwa emva koko ukwazi ukuphendula. Uyaphulaphula, aphendule, ade akwenze uzive ukhululekile ukuba ubuze nawuphi na umbuzo ofuna ukuwubuza. Ubunokubuza ntoni?
2 Mandulo, kwakukho indoda eyayikwimeko efanayo naleyo. Igama layo yayinguMoses. Noko ke, usenokumangaliswa ngumbuzo eyakhetha ukumbuza wona uThixo. Ayizange ibuze ngesiqu sayo, ikamva layo, okanye ukubandezeleka koluntu. Kunoko, yabuza igama likaThixo. Usenokukufumanisa kukhwankqisa oku, kuba uMoses wayesele elazi igama likaThixo. Ngoko, lo mbuzo wakhe umele ukuba wawunentsingiselo enzulu. Eneneni, ngowona mbuzo ubalulekileyo uMoses awayenokuwubuza. Impendulo yawo iyasichaphazela sonke. Inokukunceda ukuba uthabathe amanyathelo abalulekileyo okusondela kuThixo. Njani? Makhe sihlolisise loo ncoko imangalisayo.
3, 4. Ziziphi iziganeko ezakhokelela ekuncokoleni kukaMoses noThixo, yaye wawuyintoni umongo waloo ncoko?
3 UMoses wayenama-80 eminyaka ubudala. Wachitha iminyaka engamashumi amane engekho phakathi kwabantu bakowabo, amaSirayeli, awayengamakhoboka eYiputa. Ngenye imini, ngoxa wayesalusa umhlambi kamkhwe wakhe, wabona umbono ongaqhelekanga. Wabona ityholo lisitsha, kodwa lalingade litshe liphele. Laliqhubeka livutha umlilo oqaqambe okwesibane esikhanyise entabeni. UMoses wasondela ukuze ahlole. Hayi indlela amele ukuba wothuka ngayo xa kwathetha ilizwi phakathi kwaloo mlilo! Esebenzisa ingelosi njengesithethi sakhe, uThixo wancokola ithuba elide noMoses. Yaye, njengoko usenokuba uyazi, apho uThixo wathuma uMoses owayemathidala ukuba ashiye ubomi obuzolileyo awayebuphila aze abuyele eYiputa ukuze ahlangule amaSirayeli awayesebukhobokeni.—Eksodus 3:1-12.
4 Ngoko, uMoses wayenokumbuza nawuphi na umbuzo uThixo. Kodwa, phawula umbuzo awakhetha ukuwubuza: “Makwenzeke ke ndifike koonyana bakaSirayeli ndize ndithi kubo, ‘UThixo wookhokho benu undithumile kuni,’ baze bathi kum, ‘Ngubani na igama lakhe?’ Ndothini na kubo?”—Eksodus 3:13.
5, 6. (a) Umbuzo kaMoses usifundisa yiphi inyaniso elula nebalulekileyo? (b) Yiyiphi into engaxolelekiyo eye yenziwa ngegama likaThixo? (c) Kutheni kubalulekile nje ukutyhila kukaThixo igama lakhe eluntwini?
5 Okokuqala nje, loo mbuzo usifundisa ukuba uThixo unegama. Asimele sikuthabathe lula oku. Kodwa, abaninzi benza kanye oko. Igama likaThixo liye lasuswa kwiinguqulelo ezininzi zeBhayibhile kwaza endaweni yalo kwafakwa izibizo ezinjengesithi “Nkosi” nesithi “Thixo.” Le yeyona nto imbi nengaxolelekiyo eyakhe yenziwa lunqulo. Ngapha koko, yintoni into yokuqala oyenzayo xa udibana nomntu? Ngaba akubuzi igama lakhe? Kuyafana ke nangokwazi uThixo. Akangomntu ongenagama, nokude kakhulu kuthi ukuba singamazi okanye simqonde. Nangona engabonakali, ungumntu, yaye unegama—elinguYehova.
6 Ngaphezu koko, xa uThixo etyhila igama lakhe, kukho isizathu esibalulekileyo nesibangel’ imincili sokwenjenjalo. Ufuna ukuba simazi. Ufuna senze olona khetho lubalulekileyo ebomini—ukusondela kuye. Kodwa uYehova wenze okungakumbi kunokusixelela nje igama lakhe. Ukwasifundise nangomntu elimmelayo.
Intsingiselo Yegama LikaThixo
7. (a) Igama likaThixo laziwa lithetha ukuthini? (b) Yintoni awayefuna ukuyazi ngokwenene uMoses xa wabuza uThixo igama Lakhe?
7 UYehova wazikhethela ngokwakhe igama lakhe, elinentsingiselo ephangaleleyo. Igama elithi “Yehova” laziwa lithetha ukuthi “Ubangela Kubekho.” Ungoyena ukhethekileyo kwindalo iphela, kuba nguye owabangela zonke izinto zabakho, yaye ubangela zonke iinjongo zakhe zizaliseke. Ukucinga ngoku kuyamangalisa. Ngaba intsingiselo yegama likaThixo iphelele nje ekuboniseni ukuba ungumdali? Ubungqina bubonisa ukuba uMoses wayefuna ukwazi okungakumbi. Kaloku, wayesele esazi ukuba uYehova nguMdali futhi wayesele elazi igama likaThixo. Igama likaThixo lalingalitshanga. Abantu babelisebenzisa kangangeenkulungwane zeminyaka. Eneneni, ngokubuza kwakhe igama likaThixo, uMoses wayebuza ngomnini welo gama. Lilonke, wayesithi: ‘Ndingabaxelela ntoni ngawe abantu bakho amaSirayeli eya kuqinisa ukholo lwabo kuwe, eya kubenza baqiniseke ukuba ngokwenene uza kubahlangula?’
8, 9. (a) UYehova wawuphendula njani umbuzo kaMoses, yaye yintoni ephosakeleyo ngendlela impendulo Yakhe edla ngokuguqulelwa ngayo? (b) Lithetha ukuthini ibinzana elithi “Ndinguye lowo ndiya kuzingqina Ndinguye”?
8 Ekuphenduleni, uYehova watyhila inkalo ebangel’ imincili ngobuntu bakhe, enokuthanani nentsingiselo yegama lakhe. Wathi kuMoses: “Ndinguye lowo ndiya kuzingqina Ndinguye.” (Eksodus 3:14) Iinguqulelo ezininzi zeBhayibhile zifundeka ngokuthi: “Ndinguye endinguye.” Kodwa indlela echazwe ngobuchule ngayo ibonisa ukuba uThixo wayengaqinisekisi nje isibakala sobukho bakhe. Kunoko, uYehova wayefundisa uMoses—nathi sonke—ukuba wayeza “kuzingqina eyiloo nto afuna ukuba yiyo,” okanye akhetha ukuba yiyo, nantoni na efunekayo ukuze azalisekise injongo yakhe. Inguqulelo kaJ. B. Rotherham iyiguqulela ngokungqalileyo ngokuthi le ndinyana: “Ndiya kuba yiyo nantoni na endifuna ukuba yiyo.” Enye ingcali yesiHebhere seBhayibhile ilichaza ngokuthi eli binzana: “Nokuba imeko injani okanye yintoni na efunekayo . . . , uThixo ‘uya kuba’ sisicombululo saloo meko.”
9 Kwakuthetha ntoni oko kumaSirayeli? Nokuba ayejamelana nawuphi na umqobo, nokuba ayenokujamelana nobunzima obungakanani na, uYehova wayeza kuba sisicombululo sokuwahlangula ebukhobokeni aze awangenise kwiLizwe Lesithembiso. Ngokuqinisekileyo elo gama lawenza aba nentembelo kuThixo. Linokwenza okufanayo nakuthi namhlanje. (INdumiso 9:10) Ngoba?
10, 11. Igama likaYehova lisenza njani sicinge ngaye njengoyena Bawo ubhetyebhetye sinokuba naye? Zekelisa.
10 Oku singakuzekelisa ngokuthi: Abazali bayayazi indlela abafanele babe bhetyebhetye ngayo ekunyamekeleni abantwana babo. Ngemini nje enye, umzali kusenokufuneka abe ngumongikazi, umpheki, umfundisi, umqeqeshi, umgwebi, njalo njalo. Abaninzi baziva bexinekile ngenxa yendima enkulu ekufuneka beyifezile. Bayayiphawula indlela abathenjwe ngayo ngabantwana babo abancinane, abaqinisekileyo ukuba uTata okanye uMama unokupholisa amanxeba, alamle imbambano, alungise nayiphi na into yokudlala eyaphukileyo, aze aphendule nawuphi na umbuzo abanawo. Bambi abazali bayadimazeka—bade maxa wambi bacaphuke—ngenxa yokusilela kwabo. Bavakalelwa kukuba abakufanelekelanga ukuphumeza emininzi yale misebenzi.
11 Naye uYehova ungumzali onothando. Ukanti, ngokuvisisana nemilinganiselo yakhe egqibeleleyo, akukho nto angenakuba yiyo ukuze anyamekele abantwana bakhe abasemhlabeni ngeyona ndlela ifanelekileyo. Ngoko igama lakhe elithi Yehova, lenza sicinge ngaye njengoyena Bawo ufanelekileyo sinokumfumana. (Yakobi 1:17) UMoses kunye nawo onke amanye amaSirayeli athembekileyo bakhawuleza babona ukuba uYehova wenza ngokuvisisana negama lakhe. Babukela bekhwankqisiwe njengoko waba nguMphathi-mkhosi ongenakoyiswa, uMalathisi wazo zonke iziqalelo zendalo, uMniki-mthetho obalaseleyo, uMgwebi, iGcisa Lokwakha, uMniki wokutya namanzi, uMlondolozi wempahla neembadada—nokunye okuninzi.
12. Isimo sengqondo sikaFaro ngoYehova sasahluke njani kweso sikaMoses?
12 Ngoko uThixo usazisile igama lakhe, uye watyhila inkalo ebangel’ imincili ngobuntu bakhe, enokuthanani nentsingiselo yegama lakhe, yaye uye wabonisa ngokucacileyo ukuba lento ayitshoyo ngaye iyinyaniso. Ngokungathandabuzekiyo, uThixo ufuna simazi. Thina ke sisabela njani koko? UMoses wafuna ukumazi uThixo. Loo mnqweno onzulu wabuguqula ubomi bukaMoses waza wamenza wasondela kakhulu kuBawo wakhe wasezulwini. (Numeri 12:6-8; Hebhere 11:27) Ngelishwa, babembalwa abantu ngomhla kaMoses ababenomnqweno ofanayo. Xa uMoses wamkhankanya ngegama uYehova kuFaro, loo mlawuli onekratshi waseYiputa waphendula wathi: “Ngubani na uYehova?” (Eksodus 5:2) UFaro akazange afune ukwazi ngakumbi ngoYehova. Kunoko, wamnyemba uThixo kaSirayeli njengongabalulekanga. Loo mbono iqheleke kakhulu nanamhlanje. Ivalela abantu ithuba lokufumana eyona nyaniso ibalulekileyo—yokuba uYehova uyiNkosi enguMongami.
INkosi EnguMongami UYehova
13, 14. (a) Kutheni uYehova enezibizo ezininzi eBhayibhileni, yaye ziziphi ezinye zazo? (Bona ibhokisi ekwiphepha 14.) (b) Kutheni inguYehova kuphela okufanelekelayo ukubizwa ngokuba ‘yiNkosi enguMongami’?
13 UYehova ubhetyebhetye kangangokuba ngokufanelekileyo unezibizo eziliqela ezisetyenzisiweyo eZibhalweni. Ezi zibizo azilithabatheli indawo igama lakhe; kunoko, zisifundisa okungakumbi ngoko kumelwa ligama lakhe. Ngokomzekelo, ubizwa ngokuba ‘yiNkosi enguMongami uYehova.’ (2 Samuweli 7:22) Eso sibizo sibalulekileyo esivela izihlandlo ezingamakhulukhulu eBhayibhileni, sisixelela ngesigxina sikaYehova. Nguye kuphela onelungelo lokuba nguMlawuli wendalo iphela. Phawula isizathu soko.
14 UYehova nguye yedwa onguMdali. ISityhilelo 4:11 sithi: “Ufanele, Yehova, Thixo wethu, ukwamkela uzuko nembeko namandla, ngenxa yokuba wadala zonke izinto, nangenxa yokuthanda kwakho zabakho yaye zadalwa.” La mazwi azukileyo akanakusebenza kuye nabani na ongomnye. Yonke into esendalweni yenziwe nguYehova! Ngokungathandabuzekiyo, uYehova uyifanele imbeko, amandla, nozuko njengoko eyiNkosi enguMongami noMdali wezinto zonke.
15. Kutheni uYehova ebizwa ngokuba ‘nguKumkani kanaphakade’?
15 Esinye isibizo esisetyenziswa kuYehova kuphela sithi ‘uKumkani kanaphakade.’ (1 Timoti 1:17; ISityhilelo 15:3) Sithetha ukuthini? Kunzima ngeengqondo zethu ezilinganiselweyo ukukuqonda oku, kodwa uYehova ungunaphakade ngandlela zonke—akanasiqalo yaye akanasiphelo. INdumiso 90:2 ithi: “Ukususela kwixesha elingenammiselo ukusa kwixesha elingenammiselo wena unguThixo.” Ngoko uYehova akanasiqalo; ebehleli ekho ngalo lonke ixesha. Ubizwa ngokufanelekileyo ngokuba ‘nguNyangelemihla’—ubekho ngonaphakade ngaphambi kwakhe nabani okanye nantoni na enye ekwindalo iphela! (Daniyeli 7:9, 13, 22) Ngubani onokuba negunya lokulithandabuza ilungelo lakhe lokuba yiNkosi enguMongami?
16, 17. (a) Kutheni singenakumbona uYehova, yaye kutheni kungafanele kusimangalise oko? (b) UYehova ungowokwenene ngayiphi ingqiqo ngaphezu kwezinto esizibonayo nesinokuzichukumisa?
16 Kodwa, abanye bayalithandabuza elo lungelo, njengoko wenzayo noFaro. Omnye unobangela wale ngxaki kukuba abantu abangafezekanga bathembela kakhulu kwizinto abazibona ngamehlo. Asinakuyibona iNkosi enguMongami. Ingumntu womoya, ongabonakaliyo emehlweni abantu. (Yohane 4:24) Ngapha koko, ukuba umntu wenyama negazi ebenokumbona uYehova uThixo, ebeya kufa. UYehova ngokwakhe wathi kuMoses: “Akunakububona ubuso bam, kuba akukho mntu unokundibona aze aphile.”—Eksodus 33:20; Yohane 1:18.
17 Akufanele kusimangalise oko. UMoses wabona nje inxalenye yozuko lukaYehova, ekucacileyo ukuba wayemelwa yingelosi. Waba yintoni umphumo woko? Ubuso bukaMoses ‘bakhazimla’ kangangethuba elithile emva koko. AmaSirayeli oyika kwanokumjonga uMoses ebusweni. (Eksodus 33:21-23; 34:5-7, 29, 30) Ngoko ke, ngokuqinisekileyo akakho umntu onokukwazi ukujonga iNkosi enguMongami uqobo enalo lonke uzuko lwayo! Ngaba oko kuthetha ukuba asingomntu wokwenene njengezinto esizibonayo nesinokuzichukumisa? Akunjalo, zininzi izinto esingaziboniyo esaziyo ukuba zikho ngokwenene—ngokomzekelo, umoya, amaza omoya neengcinga. Ngaphezu koko, uYehova uhlala ehleli, akachatshazelwa kukuhamba kwexesha, kwanokuba lingaba ngamawaka ezigidi zeminyaka! Ngenxa yoko, ungowokwenene ngakumbi lee kunayo nantoni na esinokuyichukumisa okanye siyibone, kuba izinto zendalo ezibonakalayo ziyaluphala zize zibole. (Mateyu 6:19) Noko ke, ngaba sifanele sicinge ukuba ungamandla aqikelelwayo angengomntu okanye unguMthombo Wendalo ongacacanga? Makhe sibone.
UThixo Uneempawu Zomntu
18. Nguwuphi umbono awawuboniswayo uHezekile, yaye yintoni efanekiselwa bubuso obune ‘bezidalwa eziphilayo’ ezikufuphi noYehova?
18 Nangona singenakumbona uThixo, kukho iingxelo ezibangel’ umdla eBhayibhileni ezisithela thsuphe ngemeko yasezulwini. Isahluko sokuqala sikaHezekile singomnye umzekelo woku. UHezekile waboniswa umbono wentlangano kaYehova yasezulwini, awayibona njengenqwelo yokulwa enkulu yasezulwini. Eyona nto ihlab’ umxhelo kukuchazwa kwezidalwa ezinamandla zomoya ezijikeleze uYehova. (Hezekile 1:4-10) Ezi ‘zidalwa ziphilayo’ zinxulumene ngokusondeleyo noYehova, yaye imbonakalo yazo isixelela okuthile okubalulekileyo ngoThixo ezimkhonzayo. Ngasinye kuzo sinobuso obune—obenkunzi yenkomo, obengonyama, obokhozi, nobomntu. Kubonakala ukuba, oku kufanekisela iimpawu ezine ezibalaseleyo zobuntu bukaYehova.—ISityhilelo 4:6-8, 10.
19. Luluphi uphawu olufanekiselwa (a) bubuso benkunzi yenkomo? (b) bubuso bengonyama? (c) bubuso bokhozi? (d) bubuso bomntu?
19 EBhayibhileni, inkunzi yenkomo idla ngokufanekisela amandla, yaye kufanelekile oko, kuba isisilwanyana esinamandla kakhulu. Yona ingonyama idla ngokufanekisela okusesikweni, kuba okusesikweni kokwenyaniso kufuna inkalipho, phawu olo ezaziwa ngalo iingonyama. Iinkozi zaziwa ngamehlo azo abukhali, akwazi ukubona kwanezinto ezincinane ezikumgama weekhilomitha qelele. Ngoko ubuso bokhozi bubufanekisela kakuhle ubulumko bukaThixo bokubona kude. Kuthekani ngobuso bomntu? Kaloku, umntu, owenziwe ngokomfanekiselo kaThixo, ulubonakalisa ngokukhethekileyo uphawu olubalaseleyo lukaThixo—uthando. (Genesis 1:26) Ezi nkalo zobuntu bukaYehova—amandla, okusesikweni, ubulumko, nothando—zibalaseliswa ngokufuthi eZibhalweni kangangokuba kusenokude kubhekiselwe kuzo njengeempawu eziyintloko zikaThixo.
20. Ngaba sifanele sikhathazeke kukuba ubuntu bukaYehova busenokuba butshintshile, yaye kutheni uphendula ngaloo ndlela nje?
20 Ngaba sifanele sikhathazeke kukuba uThixo usenokuba uye watshintsha ebudeni bamawaka eminyaka ukususela ekuchazweni kwakhe eBhayibhileni? Akunjalo, ubuntu bukaThixo abutshintshi. Usixelela esithi: “NdinguYehova, anditshintshanga.” (Malaki 3:6) Kunokuba atshintshe, uYehova uzingqina enguBawo ofanelekileyo ngendlela asabela ngayo kwimeko nganye. Ubonakalisa iinkalo ezizezona zifanelekileyo zobuntu bakhe. Kwiimpawu zakhe ezine, olona lubalaseleyo luthando. Luyabonakala kuyo yonke into ayenzayo uThixo. Uwabonakalisa ngothando amandla, okusesikweni, nobulumko bakhe. Enyanisweni, iBhayibhile isichazela okuthile okukhethekileyo ngoThixo nangolu phawu. Ithi: “UThixo uluthando.” (1 Yohane 4:8) Phawula ukuba ayithi uThixo unothando. Kunoko, ithi uThixo uluthando. Ushukunyiswa luthando, olububuntu bakhe, kuko konke akwenzayo.
21. Siya kuvakalelwa njani njengoko siya sizazi ngakumbi iimpawu zikaYehova?
21 Ngaba wakha wambona umntwana omncinane esalathisa abahlobo bakhe uyise aze ngovuyo nangamabhongo athi, “Ngutata wam lowa”? Abanquli bakaThixo banazo zonke izizathu zokuvakalelwa ngendlela efanayo ngoYehova. IBhayibhile isixelela kwangaphambili ngexesha laxa abantu abathembekileyo beya kudanduluka bathi: “Khangela! Lo nguThixo wethu.” (Isaya 25:8, 9) Okukhona uziqonda iimpawu zikaYehova, kokukhona uya kuvakalelwa kukuba unoyena Bawo ubalaseleyo unokufumaneka.
22, 23. IBhayibhile imchaza njani uBawo wethu wasezulwini, yaye sazi njani ukuba ufuna sisondele kuye?
22 Lo Bawo akanguye ongenabubele nongakhathaliyo—phezu kwako nje oko kuye kwagxininiswa ziimfundiso neengcamango zonqulo. Besingenakutsaleleka kuThixo ongenabubele, yaye iBhayibhile ayimchazi engonjalo uBawo wethu wasezulwini. Kunoko, imbiza ngokuba ‘nguThixo onoyolo.’ (1 Timoti 1:11) Uneemvakalelo ezinamandla kwanezothando. Uba “buhlungu entliziyweni yakhe” xa izidalwa zakhe ezikrelekrele zilutyeshela ukhokelo alunikelayo ukuze zilungelwe. (Genesis 6:6; INdumiso 78:41) Kodwa xa sisenza ngobulumko ngokuvisisana neLizwi lakhe, siyenza ibe “nemihlali intliziyo” yakhe.—IMizekeliso 27:11.
23 UBawo wethu ufuna sisondele kuye. ILizwi lakhe lisikhuthaza ukuba ‘simphuthaphuthe size ngokwenene simfumane, nangona, enyanisweni, engekude kuye ngamnye wethu.’ (IZenzo 17:27) Noko ke, kunokwenzeka njani ukuba abantu basondele kwiNkosi enguMongami wendalo iphela?
Ezinye Zezibizo ZikaYehova
USomandla. Amandla akhe akanasiphelo, akakho onokumelana nawo.—ISityhilelo 15:3.
UBawo. Ungumthombo wobomi, kuquka ubomi obungunaphakade, unothando olufana nolukabawo ngabakhonzi bakhe.—IMizekeliso 27:11; Yohane 5:21.
UMyaleli Ozukileyo. UnguMfundisi onobulumko bonke, esifanele sifune kuye ulwalathiso nokhokelo.—Isaya 30:20; 48:17.
ULiwa. Akaguquguquki, uligwiba lonqabiseko.—Duteronomi 32:4.
UMalusi. Uyabalathisa aze abakhusele abakhonzi bakhe abanjengezimvu aze abondle ngokomoya.—INdumiso 23:1.
Umboniso WeBhayibhile Okhethekileyo